Haweenka Kama Helaan Ninka Caqliga Badan Iyo Kan… - iftineducation.com
iftineducation.com – Go`aan ka gaaridda xariir sameeynta ama guurka waa mid si weyn ugu adag labada dhinac (ragga Iyo Dumar) waxa uuna dhinac waliba uu eegayaa calaamado uu ku xullan lahaa qofka uu xariir wadaagga uu la noqonayo.
Hadaba Alcarabiya oo ah hoyga arimaha qoyska iyo bulshada ayaa warbixintaan ku eegeysa 5-taas nin ee ay haweenka ka cararaan xariirkooda .
Ninka Aan Salka Laheyn: Haweenka wax ay jecel yihiin in ninka xariirka ama nolosha la wadaagayaan in ay ka helaan deganaasho mana jecla ninka safarka badan gaar ahaan ragga ka shaqeeya dekadaha(Badmaax) maxaa yeelay waxaa badan inta uu safarka badad yahay
Ninka Daan-daansiga Badan: Waa ninka ugu daran ee ay haweenka neceb yihiin , waxaad arkeysaa isaga oo erayo qaldan ku daan-daansanaya dadka kale , waxa ayna haweeneyda aaminsan tahay in iyadana ay qaadeyso dabeecadaas oo dadka kale ay daan-daansaneyso.
Ninka Aadka U Caqliga Badan: Inkastoo haweenka jecel yihiin ninka caqliga badan hadana kama helaan kan caqligiisu yahay mid xadka ka baxsan waa ayna ka baqaan in ay u dhawaadaan , maxaa yeelay haweenka waxa ay aamisan yihiin in iyaga oo adeegsanaya caqligooda ay raggooda ku qanci karaan sida ay doonaan ka yeelan karaan marka ninka noocaan kama helaan .
Ninka Maseerka Badan:Inkastoo haweenka jecel yihiin in ay xariir ama nolol wadaag la noqdaan nin leh tilmaan soo jiidasho oo qurxoon hadana waa ay ka cararaan ninka maseerka badan intii nin qurxoon oo maseer badan xariir la sameysan lahaayeen waxa ay ka door bidiyaan mid muuqaal ahaan iska cuntamaya laakin aan laheyn calaamadaha maseerka iyo kibirka .
5-Ninka Ku Dhex Milan Qooyskiiskiisa: Haweenka kama helaan ninka qaabka ka bad badiska ah ugu dhex milan qoyskiisa waxa ayna ninkaas u arkaan seef laba af leh , waxa ayna jecel yihiin ninka illaa xad qoykiisa ka madax banaa.